NoFap ၏တရုတ်နည်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ယောက်ျားတွေမင်္ဂလာပါ! ငါတရုတ်ထံမှမိပါတယ်။ ငါသည်လည်းတစ်ဦး nofapastronaunt ဖြစ်၏။ သငျသညျယခု 640.000 အဖွဲ့ဝင်များကတက်ကိုဖန်ဆင်းသောတရုတ်တစ်ဦး nofap-ရောနှောက်ဘ်ဆိုက်လည်းမရှိသိသလား။ ထိုသို့တစ်နေ့လျှင် 1000 အသစ်သောအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူတကယ်မြန်ဆန်စွာဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ပို. ပို. လူတွေကသူတို့ကိုလုပ်နေခဲ့ကြသောအရာကို porn စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသဘောပေါက်နေကြတယ်။ ထိုအခါငါအဲဒီမှာနှစ်ခုဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြားအချို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိ။ တရုတ်တှငျကြှနျုပျတို့ "nofap" ၏ဟူသောဝေါဟာရကိုမသုံးပါဘူး, ငါတို့ယေဘုယျအားဖြင့် (က English သို့ဘာသာပြန်ထားသောခံရဖို့ခဲယဉ်းသည်) "jiese" ခေါ် "jiese" nofap ထက်ပိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအစကသူတို့အတွေးအခေါ်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကလူမှအယူခံ။ ဒါဟာဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းနည်းနည်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီမှာဘာသာတရားအကြောင်းဆွေးနွေးကြသည်မဟုတ်။ Jiese သင့်ရဲ့ mindset.It သငျ့စိတျညစ်ပတ်ပုံရိပ်တွေနှင့်အတူသိမ်းပိုက်နေစဉ်သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏ကျန်များအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုရပ်တန့်ကြောင်းအောင်မြင်သောမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းလဲပစ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ "jiese" ကိုအောင်မြင်စွာ ပို. ပို. ကျန်းမာသန်စွမ်းစိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာ, သင် fapping ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်လူများနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကနျြးမာရေးဆကျဆံရေးရှိ start ကိုဆိုလိုသည်ရန်။
တရုတ်၏အဆိုအရ nofap ၏ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာ YY ကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည် (ဆိုလိုသည်မှာလမ်းများ၊ ကျောင်းများ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ စသည်ဖြင့်စိတ်ကူးယဉ်ရုံဖြင့်သင်တွေ့ဆုံသည့်မိန်းကလေးနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုဆိုလိုသည်) ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ YY ကတိုက်တွန်းမှုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ (စိတ်ကူးစိတ်သန်း - YY - တိုက်တွန်း +) - ကြားဖြတ် - (စိတ်ကူးစိတ်သန်း - YY - တိုက်တွန်း ++) - ကြားဖြတ် - (စိတ်ကူးစိတ်သန်း - YY - တိုက်တွန်း +++) - interim - (စိတ်ကူးစိတ်သန်း - YY - တိုက်တွန်း ++++) - - သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အထိပြင်းထန်စွာတိုက်တွန်းသည်။ ဒီတော့ဒီမှာအသုံးဝင်တဲ့တရုတ်နည်းကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အချက်ပြပါ။ အတွေးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ၊ နောက်လိုက်ကိုမလိုက်နဲ့၊ အဲဒါကိုနားလည်ပြီးသေပါလိမ့်မယ်” (စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဆိုတဲ့အခါအနည်းငယ်ထူးဆန်းတယ်) ။ ဒီဟာကမိုက်မဲတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်တကယ့်အစွမ်းထက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့စိတ်ထဲဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပုံ၊ မင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေအကြောင်းကိုလေ့လာပြီးတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက်မင်းရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာမှာပါ။ နှင့်သင်၏တိုက်တွန်း nofap ၏ခက်ခဲတိုးမြှင့်စေမည်။ ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့စွမ်းအားပြင်းတဲ့လိုင်းကိုထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားပါ။
ထိုအခါငါအကြောင်းပြောဆိုချင်ပါတယ်အခြားခေါင်းစဉ်လိင်ပညာရေးပါပဲ။ ငါကအနောက်ပိုင်းနိုင်ငံများအတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်ရှိမရှိအံ့သြနေပါတယ်။ ကျနော်တို့လိင်အကြောင်းကိုသုညပညာရေးကိုလက်ခံရရှိ, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ဂျပန် pron ကနေသိခဲ့ရတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့် pron ကြယ်တရုတ်နှင့်ဂျပန်အကြားယဉ်ကျေးမှုတံတားကြောင်းပြက်လုံး။ ပိုဆိုးမယ့်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့က masturbate ဖို့နဲ့အဲဒီအကြောင်းရှက်စရာမခံစားရဘူး OK ကိုဖွင့်ကပြောကြားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့စာအုပ်ကနေဆရာ, ဆရာမကျွန်တော်တို့ကိုပေးသောဖတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ပိုင်းအခွအေနေမတိုင်မီသကဲ့သို့မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏ပင်ထိုအချိန်ကကယုံကြည်သည်နှင့်ကျွန်တော်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားထက်ပိုမို5နှစ်ပေါင်း FAP သူကိုအင်တာနက်သုံးသူတွေရဲ့၏မရေမတွက်နိုင်သောအတွေ့အကြုံအရ, ထိုကြေညာချက်တွင်ကြီးမားသောချို့ယွင်းချက်ရှိသေး၏။ သူတို့ကသငျသညျ faping ၏ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်လျှင် masturbate မှ OK ကိုဖွင့်သငျသညျကိုပြောသည်။ ထိုသို့ဆို harm.It ၏လက်ျာသိပ္ပံနည်းကျပြုပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်လက်တွေ့မှာလုံးဝမှား၏။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိရအဖြစ်ပထမဦးဆုံး, အများဆုံးဆယ်ကျော်သက်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကင်းမဲ့နေသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအမှန်တကယ်ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူး။ သူတို့က start ပြီးတာနဲ့သူတို့စွဲဖြစ်လာသည်။ ဒုတိယအလူအများစု pron စောင့်ကြည့်အဲဒီမှာကွန်ပျူတာများများ၏ရှေ့မှောက်၌ FAP ။ porn သင်ထင်သောလမ်းကိုပြောင်းလဲသောအရာဖြစ်၏။ porn ကိုသင်ယုံကြည်မှုနည်းဖြစ်လာပါစေ။ porn သင်၏ပုံမှန်ဘဝထဲကသငျသညျကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့စိတ်ကိုမသင့်လျော်ပုံရိပ်တွေအများကြီးအပြည့်အဝရလိမ့်မည်။ ဒါဟာမိန်းမနှင့်လိင်ဆက်ဆံအိပ်မက်တနေ့လုံးဖြုန်းကယ့်ကိုသနားစရာပါပဲ။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်? နှင့်တစ်စုံတစ်ဦးကို PMO နှင့်အခြားသောအရာကိုအကြှနျုပျကိုပြောပြကျေးဇူးပြုပြီးနိုင်မည်နည်း
ချည် nofap ၏တရုတ်လမ်း